Izimvo ezi-6 zokuhombisa i-aquarium | Ngeentlanzi
Kukho uhombiso oluninzi oluluvo olukhulu lokuhombisa i-aquarium, ukusuka ematyeni okanye kwiintonga ukuya kumanani akudala anezifuba kunye nothotho okanye ngaphezulu kokucinga, njengepinapple apho kuhlala khona iSpongeBob.
kunjalo, Ayisiyiyo kuphela ngokukhetha imihombiso esiyithanda kakhulu kwi-aquarium yethu, kodwa kwanokwazi ezona singenako ukuzibeka, Kananjalo nokwazi indlela yokuzicoca kunye neengcebiso zokuhombisa. Siza kugubungela konke oku kweli nqaku. Ukongeza, sicebisa ukuba ufunde le nye iposti malunga Ukuhombisa emazantsi e-aquarium yethu ukuba ufuna ezinye izimvo.
1 Iingcamango zokuhombisa i-aquarium yakho
1.1 Gravel okanye isanti
1.3 I zityalo
1.3.1 Izityalo ezingezizo ezokwenziwa
1.3.2 Izityalo zendalo
1.5 Imihlobiso engengowamvelo
1.6 Iphepha lokuhombisa
2 Yintoni ongayifakiyo kwi-aquarium
2.2 Izinto zendalo ezinganyangekiyo
2.3 Imihombiso engalungiswanga
3 Uyicoca njani imihombiso
4 Iingcebiso zokuhombisa
Iingcamango zokuhombisa i-aquarium yakho
Akuthandabuzeki Ukuhombisa i-aquarium kunokuba yenye yezona zinto zonwabisayo, kuba sinokuyikhanyisa imbonakalo ye-aquarium yethu kwaye siyigxothe ukuba yindawo elula enamatye amane kunye nesityalo seplastiki esomileyo. Ngokuchasene noko, kwintengiso sinokhetho oluninzi:
Gravel okanye isanti
I-Amtra Gravel ye...
UDehner -Gravel ye ...
Isiseko se-aquarium nganye, ngokoqobo, kunjalo igrabile okanye isanti, ebekwe emazantsi. Ngelixa igrabile iza ngohlobo lwamatye (ngenkangeleko yendalo okanye enemibala, kunye nobukhulu obahlukeneyo), isanti ilungile kwezi ntlanzi zihlala zingcwaba kuyo okanye zichithe ixesha elininzi emazantsi endawo yokuhlala. , Njengeeels.
kunjalo, ngamanye amaxesha igrabile sesona sisombululo sisisongakumbi intuthuzelo yethu. Umzekelo, enye yeengxaki ezinkulu zesanti kukuba ukucoca kunzima kakhulu, kwaye kuhlala kufikelela kuyo yonke indawo, ke kuya kufuneka uyitshintshe rhoqo.
Kwakhona, Kuyacetyiswa ukuba ukhethe izinto zendalo, kuba ukuba zenziwe ngokwazo okanye ngeglasi azizukuvumela iintyatyambo ezilungileyo zebacteria (khumbula, kubalulekile kwi-aquarium) ukuba ivele ngokulula.
Umhombiso weHygger ...
Iimpawu zeNobby ze ...
Hoobao Iqhekeza eli-1 lomhombiso...
Ukuba ufuna ukunika i-aquarium yakho i-rustic touch, unokukhetha iilog. Zininzi iziqu zobuxoki zokuvala amehlo kwiivenkile zezilwanyana okanye eAmazon ezilingisa indalo kakuhle, kwaye, ukongeza, ekubeni zenziwe aziboli, ezinokubonelela ngendawo yokuhlala engapheliyo kwintlanzi yakho.
Nangona kunokwenzeka ukuba usebenzise imithi yendalo kwi-aquarium, kufuneka ulumke kakhulu, njengoko ingumba obuthathaka kakhulu. Ezinye iintlobo zeenkuni, umzekelo, zikhupha iiasidi emanzini ezinokubulala iintlanzi zakho. Uninzi luye lwadada, ke kuya kufuneka ubaphathe kuqala okanye ubanyuse ukuya ezantsi ngelitye, umzekelo. Ke, ayikhuthazwa into yokuba usebenzise iinkuni oziqokeleleyo, ngaphandle kokufumanisa malunga nodidi kwaye ngaphandle kokuthathela ingqalelo ukuba basebenzise iyeza lokubulala izitshabalalisi.
Isityalo se-SunGrow Plant...
Izityalo zeVibury ...
Semillas de plantas Luffy...
Izityalo Zezinye zezona zimvo zodidi ukuhombisa i-aquarium yethu. Zingaba zezendalo okanye zendalo, njengoko siza kubona ngezantsi.
Izityalo ezingezizo ezokwenziwa
Akuthandabuzeki zezona zilula ukuzinyamekela (ngokusisiseko kuba ayifuni nkathalo). Ukongeza, bahlala benemibala emibalabala kwaye banikezela indawo yokuhlala kwintlanzi yakho ngaphandle koloyiko lokuchaphazela kakubi impilo yabo. Ngapha koko, azifi okanye zibole, ezinokuthi zikhuphe amasuntswana emanzini aphakamisa initrogen, enokucinezeleka kwaye igulise iintlanzi zakho.
Nangona bengacetyiswanga kakhulu kubaqalayo, izityalo zendalo nazo zinezibonelelo zazo. Umzekelo, ukhathalelwe kakuhle ukukhutshwa kweoksijini xa usebenzisa i-CO2, into esoloko icetyiswa kakhulu kwiintlanzi zakho (khumbula ukuba badinga ioksijini ukuze baphile). Nangona kunjalo, xa uthenga izityalo zendalo qiniseka ukuba ziza kwisitya esine-sterilized ukuze ungafumani iindlela, ezinje ngemigibe, ezinokuthi zihlasele i-aquarium yakho.
Iya kuba lilitye le-Rock Hole...
Croci A4022043 Gravel for ...
Nobby, ilitye elihombisayo ...
Amatye, njengeelogo, yenye yeeklasikhi zokuhombisa nayiphi na i-aquarium. Ungazifumana kwiindawo ezininzi kwaye, kule meko, ukusetyenziswa kwamatye endalo akunabungozi njengaleyo yeengodo. Okwangoku, ukuze uqiniseke ukuba zikhuselekile ekusebenziseni, zifake emanzini iintsuku ezimbalwa kwaye ujonge ukuba i-pH ayitshintshanga na.
Olunye uvavanyo lokujonga ukuba ilitye olikhethileyo kwi-aquarium yakho alinazo iiasidi ezinokubulala iintlanzi zakho, ngokukhawuleza okukhulu uthele iviniga kwilitye. Ukuba anenzi nto, eli litye likhuselekile. Kwelinye icala, ukuba ibhabhu, iqulethe iiasidi, ke akufuneki ukuba uyongeze kwi-aquarium. Olu vavanyo lunokwenziwa nge-hydrochloric acid, kodwa iyingozi kakhulu (ndikuxelela ngamava: udadewethu, oyingcali yejoloji, ukhe washiya ibhotile egcweleyo yamanzi ndaphantse ndafa).
Ukuhonjiswa kwezinto ezingezizo ezentengiso kuyathengiswa kwiindawo ezininzi, kwaye kungcono, kukulungele ngokupheleleyo ukuntywiliselwa, ngenxa yoko awuzukubandezeleka ngenxa yeentlanzi zakho. Kwaye ukuba oko akwanelanga, babonisa iintlobo ezahlukahlukeneyo ezothusayo, ikakhulu phakathi kwezona klasiki zakudala (ezahlukeneyo, iibhokisi zobutyebi, iinqanawa ezitshonileyo, iihempe zokuphambuka, amabhodlo, izakhiwo zaseMpuma, amaBuddha ...) kwizinto ezinokuqikelelwa (Stonehenge, ipayinapile yeSpongeBob, i-Star Wars AT-AT, volcanoes, mushroom, skulls ...).
Ipowusta yolutsha ...
Póster adhesivo de PVC...
Ukuba ufuna ukunika i-aquarium yakho ubunzulu obunzulu, iphepha lodonga sisisombululo. Azizotywanga ngokwenyani, kodwa bayifoto eprintiweyo, ihlala kwiphepha elinamathelayo, onokuthi uncamathele ngasemva kwi-aquarium (kucacile ngaphandle). Uninzi lwazo lubunjiwe njengolwandle, nangona ungafumana ezona zinqobo ngamahlathi, iingxangxasi ... Nokuba awufumani zithombe uzithandayo, unokukhetha ukuyiprinta. Kuyacetyiswa kakhulu ukuba kule meko uyihlambe, kuba, nokuba iphume emanzini, iya kuba manzi ekugqibeleni.
Yintoni ongayifakiyo kwi-aquarium
Inye uthotho lwezixhobo ekungacetyiswa ukuba zibekwe emanzini, njengoko siza kubona ngezantsi, kwaye unokuhendeka ukuba ungene. Njengokuba:
Ikorale intle, kodwa isetyenziselwa ukuba igcwele i-toxins kunye ne-bacteria oko kungonakalisa indalo yakho yaselwandle. Ukongeza, i-coral efileyo inombala omdaka kwaye imbi kakhulu, ihlwempuzekile, ke kuya kuhlala kucetyiswa ngakumbi ukukhetha ukhetho olungelulo kodwa lupholile kwaye luyathandeka emehlweni.
Izinto zendalo ezinganyangekiyo
Phambi kokuba sikunike iimbono ezimbalwa zokunyanga iinkuni kunye namatye endalo ofuna ukuwongeza emanzini. Nangona kunjalo, ukuba awuqinisekanga kwaye ungumtsha kule ndawo, kungcono uye kumatye okwenziwa kunye neentonga.
UmIndiya weplastikhi angathandeka kakhulu kwi-aquarium yakho, kodwa kuya kufuneka uyazi ukuba ayisiyomhombiso inyangiweyo yokuntywiliselwa emanzini, ke inokuba yityhefu kwintlanzi nakwizityalo zakho. Kwenzeka into efanayo nangenye "imihombiso" ongakhange uyiphathe okanye engajoliswanga yiyo, umzekelo, iingqekembe, iiminerali, iglasi epeyintiweyo ...
Uyicoca njani imihombiso
Rhoqo, njengoko kubonakala, Kuya kufuneka ucoca imihombiso onayo kwi-aquarium yakho. Yayo:
Okokuqala, ucoceko olucocekileyo kunye nezityalo ezingezizo ezokufakelwa onayo kwi-aquarium ngaphandle kokususa amanzi kunye nebrashi. Sukuba rhabaxa kakhulu ukuba awufuni kuyilayisha.
Emva koko, coca igrabile ukusuka ezantsi ngevuthuluka yegrabile. Ngale ndlela awuyi kucoca amatye kuphela, kodwa unokusebenzisa ithuba lokutshintsha okanye lokugcwalisa amanzi.
Ngendlela, ukuba ucocekile uhombiso lwangaphakathi, sukusebenzisa ibrashi enzima kakhulu ukuba awufuni ukukrwela imifanekiso.
Nokuba kunjalo amanyathelo ambalwa alulaInyaniso kukuba yenye yezona zinto zinzima xa ugcina i-aquarium, kodwa kubaluleke kakhulu ukugcina ucoceko.
Okokugqibela yintoni i-aquarium yakho ipholile , Njengokuba:
Cinga ngale space unantoni kwaye ufuna ukubeka ntoni (izinto ezenziweyo okanye zendalo, amanani ...)
Ukuba ngu-eInkqubo yezolwandle, umxholo wolwandle uya kuba ngcono, ngelixa ingamanzi amatsha, umlambo.
Cinga ngohlobo luni igrabile okanye isanti ilungele iintlanzi zakho.
Musa ukubeka izinto ezininzi kunye ukuba awufuni kugxininisa iintlanzi zakho okanye ube ne-aquarium egcweleyo. Izityalo zendalo nazo zifuna indawo engaphezulu.
Qwalasela yongeza into ethile enemingxunya indawo ezinokufihla kuyo iintlanzi.
Umlinganiselo omnye osebenza kakuhle kukukhetha ukubeka isiqwenga esikhulu embindini kunye nesincinci esincinci esiphelweni.
Amaxesha ngamaxesha Kuyacetyiswa ukuba ususe iithambiso kunye nemihombiso emazantsi e-aquarium (ngokucacileyo oku akusebenzi kwizityalo zendalo) ukunika iintlobo ezahlukeneyo kunye neentlanzi zakho.
Siyathemba ukuba ezi zimvo zokuhombisa i-aquarium zisebenze njengesikhokelo sokwenza ezakho zipholile ngokwenene. Khawusixelele, ukhe wayihombisa i-aquarium okanye ngaba uziva ulahlekile? Ngaba ungaphezulu kwezityalo zendalo okanye ezenziwe ngumntu? Ngaba kukho umhombiso owuthanda ngokukodwa?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Izixhobo » Iingcamango ezi-6 zokuhombisa i-aquarium